14 Aayadaha Kitaabka Quduuska ah ee loogu talagalay Dhallinyarada Kaatooligga | Talooyin Xoogan?
Inaad dhalinyaro ahaato oo ku mashquuliso shaqada Rabbiga waa wax runtii qaali ah, qaasatan xilliyadan oo wax walba ay umuuqdaan inay ka sii adag yihiin. Dhallinyardu si joogto ah ayey isu beddelaan waana muhiim in la ogaado kuwaas Aayadaha Kitaabka Qudduuska ah ee loogu talagalay dhalinyarada Katooliga ah in aan haysanno intii karaankeenna ah markii aan u baahanahay.
Qoraallada xoogga, dhiirrigalinta, tusaale ahaan iyo waano qaadashada qaaska ah ee dhalinyarada go'aansaday inay Rabbiga u adeegaan. Qoraalladan oo dhan waxaa lagu hayaa kutubyada xurmada leh waana inaan ku qasbanaano oo aan ujeclaano ereygiisa, si aan si qoto dheer u ogaano.
Maanta waxaan u baahanahay dhalinyaro si ay u fiiriyaan Rabbiga, waxaynu ka buuxaan dembiyo aad u tiro badan, kuna lumay damacyada adduunka aadna u yar ayaa ah kuwa waqti u qaata inay Ilaahay u dhowaadaan oo tani waa inay sabab u noqotaa welwelka bulshada oo dhan. .
Haddii aad rabto inaad u soo dhowaato Ilaah oo aad tahay nin dhallinyar ama haddii aad mar hore isaga u adeegto laakiin aad u raadinayso erey qaas kuu ah, runtii qoraalladan ayaa maalin kasta kaa caawin doona.
1 1. Ilaahay wuxuu taageeraa dhalinyarada
2 2. Ilaah waa ku garab taagan yahay
3 3. Ku kalsoonow awoodaha Eebbe
4 4. Dhalintu waxay leeyihiin caawimaad Ilaah
5 5. Sayidku dhammaanteen wuu ina wada ilaaliyaa
6 6. Eebbe wuxuu talo siiyaa dhalinyarada
7 7. Ilaah baa dhinacayaga iska jira
8 8. Had iyo jeer iimaanka kula soco
9 9. Rumayso awoodaha Masiixa.
10 10. Ogolow iimaanka qalbigaaga
11 11. Weydiiso caawimaad Ilaah markii loo baahdo
12 12. Iimaanku wuu ka adkaadaa caqabadaha oo dhan
12.1 13. Ilaah waa rajo
13 14. Had iyo jeer anigu Rabbiga ayaan u ahaan doonaa
1. Ilaahay wuxuu taageeraa dhalinyarada
1 Samuel 2: 26 "Oo yar yar Samuu'eelna wuu koray, Ilaahna wuu ka aqbalay dadka hortooda."
Cutubkan kitaabiga ah waxaa nalooga sheegay nin dhalinyaro ah oo ku koray macbudka maxaa yeelay hooyadiis markii ay umushay waxay siisay Rabbi iyo Samuu'eel oo sidii ilmo yaqiinay waxay ahayd inuu ahaado midiisa Eebbe. Tusaale sheeko oo loogu talagalay dhammaan dhallinta Katooliga ah ee go'aansada inay Ilaah u adeegaan intuu yar yahay.
2. Ilaah waa ku garab taagan yahay
Matayos 15:4 Maxaa yeelay, Ilaah baa amray isagoo leh: Aabbahaa iyo hooyadaa maamuus; iyo: Ku alla kii caayaa aabbaha ama hooyada, wuxuu u dhintaa si aan la ilaawi karin ".
Tan waxaa loo yaqaanaa amarkii ugu horreeyay oo fuliya ballanqaad waana wax xiiso leh in loo sameeyo oo keliya ma aha dhalinyarada oo keliya laakiin qof walba guud ahaan. Si kastaba ha noqotee, dhallinyardu waxay ku habboon yihiin ereygan maadaama qaar badan oo ka mid ahi ay soo mareen marxalado adag ka dibna Sayidku wuxuu iyaga uga tagayaa talo iyo ballanqaad cimri dheer.
3. Ku kalsoonow awoodaha Eebbe
Baroorasho 3:27 “Way u wanaagsan tahay nin inuu harqood gareeya yaraantiisii.
Dhalinta Eebbe ama waxay noqon kartaa culeys laakiin waa wax lagu farxo in aan kuugu adeego maalmaha ay xooggeena iyo geesinimadeena u muuqdaan in ay boqolkiiba boqol yihiin. Dhallinyardu waa wanaagsan yihiin oo haddii aan nafteena u bixinno inaan ku noolaano qawaaniinta Ilaah iyo qaynuunnada iimaankeenna waxaan haysannaa dhallinyaro barakeysan waqti kasta.
4. Dhalintu waxay leeyihiin caawimaad Ilaah
1 Timoteyos 4:12 Midkiinna yuusan da 'yarayn, laakiin waxaad noqotaan tusaale kuwa rumaysta xagga hadalka, dhaqanka, jacaylka, ruuxa, rumaysadka iyo daahirsanaanta.
Waqtiyo badan oo dhallinyaro ahaanta ah oo oranaya waxaan rabnaa inaan kiniisadda uga adeegno ama aan qalbiyadeenna u dhiibno Rabbiga, si xun looma qabanin, taas baddalkeed, waxaan sabab u nahay jees jees, laakiin halkan Sayidku wuxuu na siiyaa talo wuxuuna nagu dhiirrigeliyaa inaan qaadanno Go'aanka inaan raacno xitaa markaan yaraa.
5. Sayidku dhammaanteen wuu ina wada ilaaliyaa
119 Sabtiyada: 9 Nin dhallinyaro ahu muxuu jidkiisa ku nadiifiyaa? Anigoo ilaalin doona eraygaaga.
Jidka dadka da'da yar ee katooliga ah iyo qofkasta oo ku dhaqma caqiidada qalbiga, waxay u baahan tahay in si joogto ah loo nadiifiyo maadaama ay had iyo jeer wasakh noqoto ka dibna waannu turunturoonnaa. Qoraalkan Ilaah wuxuu na weydiinayaa su’aal wuxuuna na siinayaa jawaabtiisa. Sida kaliya ee aan ku caddeyn karno jidkeenna waa in la ilaaliyo erayga Ilaah.
6. Eebbe wuxuu talo siiyaa dhalinyarada
Yeremyaah 1: 7-8 Oo Ilaah wuxuu igu yidhi, Ha odhan, Dhallinyaraan ahay maxaa yeelay waxaad u tagi doontaa wax kasta oo aan kuu soo diro, wax walbana oo aan kuu soo diro waad u sheegi doontaa. Ha ka baqin hortooda, maxaa yeelay, waxaa kula jira inaan ku xoraynayo, ayuu yidhi Ilaah ”.
Ammaan darrida ayaa loo soo bandhigi karaa waqti kasta, iyadoo aan loo eegin da'da aan jir nahay, laakiin markaan yaraynno, nabadgelyo-darradu waxay u muuqdaan inay doonayaan inay la wareegaan fikradeenna. Waa inaan hubnaa in Rabbigu meelwalba inagu raaco oo uu nagu hanuuniyo inaan wax walba si sax ah u qabno, wuu ina xoojiyaa.
7. Ilaah baa dhinacayaga iska jira
1 Korintos 10:23 “Wax walba waa ii sharci, laakiin wax walbaa kuma habboona; wax walba waa xalaal aniga, laakiin wax walbaa ma dhisaan ”.
Qaybtani kitaabiga ahi waxay isku deyeysaa inay noo sheegto in kasta oo aan wax walba qaban karno, ay tahay in la yiraahdo waxaan leenahay rabitaan iyo ciidanka inaan wax walba sameeyo xitaa haddii tan ama anigu aan garanayo wax wanaag ah, ma sameyn karno maxaa yeelay nama ay habboon tahay. Waan ka duwanahay maxaa yeelay waxaa nalooga soocay dhalinyaradeena inaan ilaahay u adeegno.
8. Had iyo jeer iimaanka kula soco
Tiitos 2: 6-8 Waxay sidoo kale ku boorineysaa dhalinyarada inay noqdaan kuwa caqli badan; inaad naftaada u soo bandhigto wax kasta oo tusaale u ah shaqada wanaagsan; oo markaad edbinta ku muujisid daacadnimada, iyo qummanaanta, codka iyo ereyga aan digtoonaanta lahayn, si cadowgaagu u ceebooto, oo uusan u helin wax xun inuu wax kaa sheego.
Dhiirrigalin in aan u baahan nahay oo kaliya ma ahan dhalinyarada laakiin da'da kasta. Qoraal Baybal ah oo aad u hibeyn kartid saaxiib ama aad qaraabo u siin kartaan. Waxay si macno leh oo faahfaahsan u fasiraysaa sida dhaqankeenu uusan u ahayn kaliya kaniisada dhexdeeda laakiin sidoo kale ka baxsan.
9. Rumayso awoodaha Masiixa.
Maahmaahyadii 20:29 "Ammaanta dhallinyardu waa xooggooda, oo quruxda odayaashauna waa da 'weyn."
Dadka dhallin-yarada ah, xaaladaha badankood, waa kuwo firfircoon, xoog badan, dardaaran oo aan waxba ka baqaynin, laakiin waayeelka iyo waxa uga soo haray waa inay ku raaxaystaan ​​nolol tayo wanaagsan leh. Tani waxay suurtogal noqon kartaa oo keliya markii aan sannadahayaga ugu wanaagsan u hibeynno adeegga Rabbiga oo aynnu iska fogeynno damaca jidhka.
10. Ogolow iimaanka qalbigaaga
2 Timoteyos 2:22 Sidoo kale ka carar damacyada dhalinyarada, oo sii soco cadaalada, rumaysadka, jacaylka iyo nabadda, oo lala jiro kuwa Rabbiga ugu barya qalbi daahir ah ".
Rabitaanka dhalinyarada waa cadow aad u xoog badan waana sababtaas darteed inaanan u wajihi karin laakiin waa inaan ka baxnaa markasta. Laga yaabee inaad ku haysato dhaqan aan laga fiirsan karin ee durdurkan ayaa sabab u ah jeesjees laakiin ogow in abaalmarintu ay ka timid xagga Ilaah oo aan xagga dadka ka imaan.
11. Weydiiso caawimaad Ilaah markii loo baahdo
Salmo 119: 11 Waxaan qalbigayga ku hayay erayadaada, Si aanan kuugu dembaabin.
Ma jiro wax ka fiican oo ka dherjinta qalbigayaga yar erayada Rabbiga. Erayadaas waxaa laga helaa ereyga Eebbe waana muhiim in aynu si qoto dheer ugu dhex qaadno dhexdeena sidaa darteed markii aan u baahanahay qoraalladan ama hadaladaas waxay ina siinayaan xoog iyo nabad, taas waxaa dheer inay naga fogeeyaan dembiga.
12. Iimaanku wuu ka adkaadaa caqabadaha oo dhan
Efesos 6: 1-2 Carruurtay, waalidkiinna ku addeeca xagga Rabbiga, waayo, taasu waa qumman tahay. Your the with and or or the Qaynuunka ugu horreeya waa kan ballanka la qaadanayaa aabbahaa iyo hooyadaa.
Kaliya maahan addeecista waalidkeena laakiin sidoo kale addeecista Ilaah, tani waa dhaqan ka bilaabma gurigeenna, markaad adeecdo waalidkeen waxaad fulineysaa ereyga Ilaah oo isagu mas'uul ayuu ka noqon doonaa fulinta ballanqaadkiisa. Waa cadaalad in aan adeecno waalidiinta iyo ilaaha, waligaa ha iloobin tan.
13. Ilaah waa rajo
Salmo 71: 5 "Maxaa yeelay, Rabbiyow Ilaahow, waxaad tahay rajadayda, oo waxaad magangal u tahay tan iyo yaraantaydii. "
Kii ka yaraa ee aan nafteenna u huraynno sidii aannu ugu adeegno Rabbiga, aad bay u fiicantahay. Lahaanshaha nolosha Eebbe ina abuuray, kan na nooleeyey, oo had iyo jeer inala wadaaga, oo aan shuruud la’aan noo jeclayn waa maalgashiga ugu wanaagsan ee aan samayn karno. Isagu ha ahaado xooggeenna iyo rajadeenna tan iyo markii aannu dhallinyarada nahay.
14. Had iyo jeer anigu Rabbiga ayaan u ahaan doonaa
Yashuuca 1: 7-9 "Xoog yeelo oo aad u dhiirranow inaad dhawrtid oo aad yeeshid si waafaqsan sharcigii addoonkaygii Muuse kugu amray oo dhan, dhankeeda ha uga leexan midigta iyo bidixda si aad ugu liibaantid waxaad qabatay oo dhan. Buuggan sharciga ahu weligiis ka tegi maayo afkaaga, laakiin adigu waa inaad ka fikirtaa isaga habeen iyo maalinba, inaad dhawrtid oo aad u samayso waxa ku qoran oo dhan, maxaa yeelay markaasaad jidkaaga ku liibaaneysaa, wax walbana si wanaagsan bay kuugu roori doonaan. Eeg, waxaan kugu amrayaa inaad dadaal samayso oo aad geesi ahaato; Ha cabsan, hana qalbi jabin, waayo, Ilaahaaga wuxuu kula jiri doonaa meel alla meeshii aad tagtidba.
Talo dhammaystiran oo dhammaystiran oo khaas ah taas oo sidoo kale ah martiqaad inagu buuxiyo xooggaaga si aad u wajaho dhibaatooyinka. Waa inaanu dadaalnaa oo aan noqonnaa geesinimo, maaddaama dhalinta Katooliga ah ay jiraan caqabado badan oo ay tahay inaan la kulanno taasina waa marka golahan uu xoog yeesho. Yaanan ka gudbin Jidadka Eebbe Maxaa yeelay isagu waa shirkaddayada.
Ku xir awooda aayadahan Baybalka ah talona u siiso Katooliga dhalinyarada ah.
Sidoo kale akhri maqaalkan 13 aayadood oo dhiirrigelin ah y 11 aayadood oo ah jacaylka Eebbe.
Aayadaha Baybalka 12 ee aroosyada iyo aroosyada
Aayadaha Baybalka ee 11 ee jacaylka Eebbe